Mookaite casaanka ah ee midabka leh waa mid jajaban oo leh sharooto wanaagsan oo guban - muuqaal ah
Tags Jeexday, Mookaite, Pink
Ka iibso mookaite casaan casaan dabiici ah leh dukaankeena
Mooskaite casaanka leh ee casaanka leh wuxuu ka kooban yahay opaque dhaldhalaalaya oo sheygeeda leh xuduudaha translucent leh shaashad wanaagsan oo isku dhegan. Matrix-ka laga helo mookaite-ga curyaamiyey si weyn ayaa loo raadiyaa oo wuxuu dhagaxa siin karaa mosaic midabbo ah oo u dhexeeya minjo jaale ah illaa caddaan iyo bunniyo fudud.
Mookaite waa Jasiirad Australiya ah oo isku darta midabada fudud ee jasper iyo casaanka cas. Waxay dhiirigelisaa rabitaanka waayo-aragnimada cusub waxayna gacan ka geysaneysaa isku dheelitirnaanta howlaha dibadda iyo jawaabta gudaha ee kuwan. Waxay keenaysaa deganaansho qoto dheer iyadoo dhiirigelineysa wadajirka.
Mookaite ereygu waa magac aan rasmi ahayn oo la soo saaray, kaas oo loo yaqaan Jasper Australia. Kennedy Ranges ee Galbeedka Australia iyo masaafada u dhow Mooka Creek waa meesha, halkaas oo dhagaxan laga helay laguna magacaabay. Jasper-ka Australiyaanka ahi wuxuu ka kooban yahay qurux iyo sharaf qurux badan muuqaalka kiristaahada Mookaite. Mookaite Jasper waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay dhagxaan xoog badan oo bogsiinta ku xira qofka shaqadiisa iyo tamarta saxda ah ee dhulka. Dhagxaanta 'aboriginal' waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dhagaxa hooyada ee loo yaqaan "Earth Earth Stone", oo ah dhagax qurux badan oo caan ka ah adduunka oo dhan, sababtoo ah awooda uu ku leeyahay bogsiinta iyo xarunta isku xidhka tamarta Dunida.
Qaylada kirismaska ​​ee mookaite casaan leh waxay ku dhacdaa tiro noocyo ah sida Mookite, Moakite, Moukite, Mookalite, Mookerite, Mook ama Mook Jasper, sida loo yaqaan 'Mooka Creek', oo hindisay dhagaxan, Mookaite waa kala duwan oo sax ah.
Mookaite casaanka leh ee midabka leh ayaa loo soo bandhigi karaa iyada oo ah iskudarka chert, opalite iyo chalcedony. Qeexitaankeeda gabi ahaanba waxay kuxirantahay qadarka silica, oo hada kujira sheyga. Da 'tartiib tartiib ah waa mid ka mid ah guryaha bogsashada ugu muhiimsan Mookaite dhagxaanta.
Mooskaite-ka guduudka ah ee midabka leh ayaa ah dhagax adag, iyo go'aan qaadashada.
Australia gudaheeda, mookaite wuxuu ahaa welina loo arkaa inuu yahay dhagxaan bogsanaya oo xoog siiya. Waxaa la sheegay inay gaashaanka ka gaashaamayso duruufaha adag iyo inay nagu xidhaan kuwa ay jecel yihiin ee dhintay. Waxaa la rumeysan yahay inay ina keenayso “halkan iyo hadda,” kaalmaynta qiimaynta dhibaatada iyo go'aan qaadashada.
Daweynta mookaite Jasiiraddu waxay kordhineysaa dabacsanaantaada iyo awoodaada aad ku aragto dhowr xalal mushkilad kasta.
Mookaite jejebiyey ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurka qanjirada ama xanuunnada caloosha, hernias, dillaaca iyo haynta biyaha, iyo xiisaha yoga waxay u isticmaalaan inay isku dheelitiraan oo ay furaan midka koowaad, labaad iyo saddexaad.
Mooskaite casaan qafiif ah leh, oo ka yimid Australia
Tags Jeexday, Mookaite